Owayedlala ku-PSL ubhadle ejele ngelokudlwengula | isiZulu
Owayegijima ku-PSL ufunelwa izinsolo zokudlwengula
Usephinde washaya adume ngazo uMasibusane Zongo
'Kumele alibambisise leli thuba uZongo'
Durban - Ubhadle ejele umdlali ozakhele udumo kwi-Absa Premiership ngomjiko oshiya abalandeli bebambe ongezansi njengoba ebhekene necala lokudlwengula.
UMasibusane Zongo, 27, ogcine ukubonakala ebholeni ngesizini eyedlule egijima kuRoyal Eagles edlala kwiNational First Division kuthiwa ubhadle ezitokisini zasesiteshini eWestern Cape njengoba ephule imibandela yakhe yebheyili.
Lo mdlali uzithola ebhadle ejele nje, uvulelwe icala lokudlwengula yintombazane eneminyaka engu-19 ubudala eKapa ngoFebhuwari 2013.
Uboshwe ngomhlaka-7 Mashi ngonyaka ofanayo wabe esededelwa ngebheyili, kubika ILANGA.
Emuva kokudedelwa ube esenyamalala okwenze kwaphuma incwadi egunyaza ukuba aboshwe ekuqaleni kwalo nyaka. Ugcine ngokuboshwa njengoba kuvela ukuthi ubhadle esiteshini samaphoyisa akasalitholi ithuba lokudlala ibhola.
OLUNYE UDABA: Usephinde washaya adume ngazo uMasibusane Zongo
Okhulumela i-NPA eWestern Cape u-Eric Ntabazalila ukuqinisekisile ukuthi lo mdlali ubhadle ejele kanti kungekudala lizoqala ukuqulwa icala lakhe. Nokho kuthiwa uyaliphika.
"Ngingakuqinisekisa ukuthi uMasibusane Zongo ubekwe icala lokudlwengula intombazane eneminyaka engu-19 ubudala eGoodwood ngo-2013. Uboshwe ngoMashi wavela eNkantolo yesiFunda eParow ngawo lowo nyaka.
"Udedelwe ngebheyili ngemibandela yokuthi kufanele avele enkantolo kodwa wangakwenza lokho yabe isicwila ibheyili yakhe waboshwa. Njengamanje ubhadle esiteshini samaphoyisa kuze kube kuphothulwa icala," esho.
Uthe ummeli wakhe wacela ukuhoxa ekumeleni lo mdlali, wabe esethola omusha.
Icala liphindela enkantolo ngoLwesihlanu (kusasa).
UZongo uzithola ebhekene nale nkinga nje ubevele edume ngokuhlupha emakilabhini abedlala kuwo njengoba ubengalubhadi ejimini ancamele ukuyodakwa.
Montague Gardens - 17:15:27 PM HEAVY TRAFFIC in Montague Gardens and surrounding areas Ezinye zasemigwaqeni